Kedu otu esi achọta ngwa ngwa kachasị achọ na Amazon?
E nweghị onye na-eche na onye ahịa ọ bụla na-aga nke ọma kwesịrị ịnọgide na-adị ọhụrụ na ụdị ahịa ahịa ahịa ugbu a ma mara nke ọma ihe kachasị achọpụta na Amazon. Gini mere ihe omuma a ji di oke mkpa maka onye obula n'umu ihe ntanetu ugbua? Naanị n'ihi na ọ bụghị naanị ụlọ ahịa weebụ, ma ụlọ ahịa brik-na-mortar mbụ na ahịa - niile pụtara inye ndị mmadụ kpọmkwem ngwaahịa ndị ndị mmadụ na-achọ n'ezie. Ọ pụtara na onyinye achọtara nke ọma na ngwaahịa ndị a na-ewu ugbu a bụ eleghị anya nanị ụzọ isi gbanwee kachasị ndị na-ere ahịa n'ime ndị na-ere ahịa n'ezie - casual dresses. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe kachasị mma iji mee ihe nchịkọta ihe gị na ngwaahịa kachasị achọpụta na Amazon - ị nwere echiche a doro anya na ị na-aga n'ihu na egwu. Maka ndị ka na-eche na ejighị n'aka na ụdọ kwesịrị ekwesị ịchọta ịchọta ihe kachasị mma na Amazon ma ọ bụ na-ekwe nkwa na-ere ahịa na-enweta nanị na - ewu ewu maka oge - nke a bụ ntụziaka dị mkpirikpi ka ị nyere aka na nke ahụ.
Ịchọta Ngwaahịa kachasị achọpụta na Amazon ịzụta Online
Chọpụta N'ihi Google Trends
Ụzọ kacha mfe ịchọta ngwaahịa kachasị achọpụta iji nye ha na ntinye aka nke Amazon gi bu site na imeju ihe obula nwere ike iburu ihe - ozugbo banye na Google. Enweghị ihe ọ bụla ị ga-ekwu na ngwá ọrụ mbụ a sitere n'iche ntanetị nke ụwa dị n'èzí. Gbalịa jiri usoro mmụta sayensị a nke ọma ma chọpụta ngwa ngwa ma otu ngwaahịa ọ na-arịwanye elu ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ihe niile gbasara usoro Google bụ nkọwa nke onwe gị. Ana m ekwu na ngwaahịa ọ bụla achọpụtara, gụnyere ndị na Amazon, enwere ike ịtụ anya na achọtara n'ime mpịakọta ọchụchọ na ebe ndị akọwapụtara na Google Trends.
Chọta Ngwa Ndị Dị Mma N'akụkụ Ịntanetị
Ewezuga Amazon, ị nwere ike ịchọgharị ebe ndị ọzọ dị n'ahịa ndị dị ugbu a bụ ndị na-ewu ewu n'etiti ndị na-ere ahịa ecommerce na-arụ ọrụ ka i wee nweta nnukwu foto nke njikọ ụwa dum - na-eleta ọbụna otu ecommerce n'elu. Ekwuru m na ị ga-enwe ike ịghọta nke ọma na ngwaahịa ndị na-ewu ewu ugbu a maka ire ere, ma ọ bụ na-ekwe nkwa ịghọ onyinye kachasị mma n'oge na-adịghị anya. Naanị kwụọ ụgwọ ahịa ugboro ugboro na ngwaahịa Amazon na ndị ahịa kachasị mma, chọpụta maka ere ahịa zuru oke na eBay, nakwa nke kachasị mma na Alibaba online store.
Get Enyem aka na JungleScout Tracking Tool
Ugbu a, ọ bụ oge iji weta ngwaọrụ ngwá ọrụ JungleScout na egwu. Kedu ihe ma ọ bụrụ na ị nwere ike ichezọ nsogbu ahụ niile otu ugboro? Nyere aka na onye ọkachamara n'enyemaka n'ịntanetị bụ nke a kwadebere iji soro usoro niile ịzụrụ na ịnye ọnụ ahịa, iji mee ka ndị ahịa na-atụ anya ohere na-aga n'ihu n'ebe ahụ, nakwa dị ka ọ bara uru iji chọta ngwaahịa ndị kasị achọpụta na Amazon. Ọzọkwa, site na iji JungleScout, ị nwere ike ọ bụghị naanị chọta ngwaahịa ọ bụla ị chọrọ, mana nweta ihe ọmụma bara uru dị ndụ iji bulie ndepụta ngwaahịa gị site na isiokwu dị mma na ogologo oge ịchọta okwu - ma hụ onwe gị n'etiti ndị na-ere ahịa kachasị elu na nke ahụ ahịa nke zuru ụwa ọnụ.